Casiirka Iskuxirka SEO ee YouTube
Waxaan soo qabtay guulo badan oo aan ka faa'iideysanayay Youtube si aan u xoojiyo ku-xirnaanshaha bogagga degitaanka ee ereyga muhiimka ah. Waa nidaam fudud oo waa tan sida ay wax u socdaan:
Abuur bog soo degitaan oo leh ereygaaga muhiimka ah URL-ka, xarfaha loo kala saaray. Tani waxay ka caawineysaa bot-ka inay u eegaan ereyada si ka duwan sidaas darteedna waxay qirayaan ku-xirnaanshahaaga weedhaha aad beegsanayso. Tusaalahan, waxaan isticmaali doonaa http://www.addresstwo.com/small-business-crm/
Samee fiidiyoow aad ku dhajin doontid boggan soo degaya. Marka laga eego dhinaca SEO, muuqaalka fiidiyaha wax macno ah malahan sababtoo ah dhamaanteen waan ognahay in bots aysan gurguurta karin fiidiyowga. Laakiin, marka laga eego aragtida aadanaha, hubi in fiidiyowgu dhab ahaantii khuseeyo. Ka dib oo dhan, tani waa bogga aan u wadayno taraafikada.
Fiidiyowga soo galiya Youtube iyo u isticmaal ereygaaga muhiimka ah ama weedhaaga cinwaanka fiidiyowga. Tusaale ahaan, fiidiyowgeyga waxaa cinwaan looga dhigay, "Ganacsiga Yaryar CRM"
Ugu dambeyntii, geli iskuxirahaaga 'hyperlink' (http: // oo lagu daray) sharaxaada muuqaalka.
Markay Youtube daabacdo fiidiyowgaan, xarig kasta oo la helo oo u dhigma qaabka URL, oo ​​ka bilaabanaya HTTP, wuxuu si toos ah ugu xiran yahay URL-kaas. Halkani waa halka bogga soo degitaanka URL laftiisu muhiim yahay maxaa yeelay ma awoodid inaad adigu wax ka qabato qoraalka barroosinka naftaada, Youtube si fudud ayuu cinwaan ugu xirayaa. Sidaas, haysashada ereygaaga muhiimka ah cinwaanka hubiyaa in qoraalka barroosinka uu ku jiro eraygaaga muhiimka ah. Tusaale ahaan, fiiri URL-ka iskuxiraha isku xiran boggan fiidiyowga Youtube ah.
Laakiin kani maahan xiriir aan la raacin? Dabcan waa. Sumadda barroosinka ee ay Youtube ku duubato URL-kaaga ayaa la siin doonaa sifo rel = ”maya-raac”. Qiyaas waxa: yaa daneeya! In kasta oo waxa heerka w3 uu leeyahay aag-raac aan la raacin loo malaynayo inuu macnahiisu yahay, xog taariikhi ah ayaa ii muujisay waqti iyo waqti in kuwan isku-xidhka ah ee loo malaynayo inaan la raacin ay gacan ka geysanayaan kor u qaadista ku-habboonaanta URL-ka bartilmaameedka. Inkasta oo ay ka waxtar yartahay iskuxirka boostada, waa waxtar.
Intaa waxaa dheer, sumadda H1 ee boggan, cinwaanka, waxaa ku jira ereygaaga muhiimka ah. Marka, waxaad leedahay bog ku habboon eraygaaga muhiimka ah ee ku xiraya boggaaga degitaanka adoo adeegsanaya qoraal barroosinka oo lagu buuxiyay ereygaaga muhiimka ah. Way fududahay!
Ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, ku duubista fiidiyowgan bogga soo degitaanka halka uu hadda ku xiran yahay waa tallaabo muhiim ah oo kama dambeys ah. Fiidiyowgan gundhigga ahi wuxuu u sheegayaa bot-ka Google in waxyaabaha ku jira bogga ay runtii la xiriiraan ereyga muhiimka ah ee la doonayo. Sababta Sababtoo ah cinwaanka fiidiyowga gundhigga ah waxaa ku jira ereyga muhiimka ah ee boggan lagu bartilmaameedsanayo. Halka walxaha kale ee flash-ka ee gundhigga ah aan gurguurayn, waxaan kalsooni buuxda ku qabaa in Google bot uu aqoonsan yahay sheyga Youtube iyo qodobbada cinwaanka fiidiyowgu ugu jiro algorithm-ka.
Webtrends Demos Falanqaynta Jiilka Xiga
Mar 6, 2011 at 6: 54 PM
Waxaan samayn lahaa hal talo - xiriiriyahaaga ka hor mari mawduucaaga halkii aan ka ahaan lahaa. Dad badan ma fidaan oo ma akhriyaan gebi ahaanba soo galitaanka sharaxa YouTube-ka. Waxaad ka heli doontaa inaad kordhineyso heerkaaga guji-riix adoo hor dhigaya xiriiriye.
Aug 8, 2011 at 10: 01 AM
Cajiib! Taasi waa wax laga naxo! Ma ogeyn taas! Laakiin, waxaan qabaa su'aal: haddii aad xiriirin ku sameyso bartaada ka dib markaad faallo ka bixiso fiidiyow, taasi miyey u xumaaneysaa ganacsigaaga? Waxaan ula jeedaa, google ma ciqaabi doonaa degelkayga? hadaanay ahayn, wax xun ma dhici karaan?
Mar 7, 2011 at 2: 24 AM
Waxaan bilaabay inaan tan sameeyo wax yar bil ka hor waxaanan helay natiijooyin wanaagsan oo dhab ah oo aan ku koobnayn aniga oo keliya laakiin dhowr macmiil sidoo kale. waad ku mahadsantahay inaad sirtayda ka siiday bacda. LOL.
Mar 7, 2011 at 7: 13 PM
Waxyaabaha kale ee la sameeyo waa in la qoro muuqaalkaaga fiidiyowga ah. Tani waxay siin doontaa fursad wanaagsan oo lagu arko gudaha YouTube sidoo kale. Saaxiib ayaa madaxyada isiiyay http://speakertext.com taas oo ah adeeg adiga kuu qabta shaqooyin badan. Waan hubaa inaad ku soo dari karto qoraalka la duubay bogga soo degitaanka oo aad ka qarin karto aragtida dadweynaha iyadoo wali aad caawinayso darajadaada bogga. Faahfaahin aad u fiican iyo talooyin ku saabsan sida dhabta ah loo wanaajiyo waxyaabaha fiidiyoowga ah halkii aad iska dhigi lahayd.
Mar 7, 2011 at 7: 16 PM
Faahfaahin weyn. Dad badani ma fahansana sida fiidiyowyada loo qoro ay u caawin karto iyaga. Sidoo kale fiiri inaad ku qoroso adeeg sida qoraalka Hadalka. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku dhejiso qoraal qoraal ah YouTube-ka taas oo kuu sahleysa inaad ka heshid waxyaabaha fiidiyowga ah YouTube-ka laftiisa. Waxaad u badan tahay inaad qaadan karto qoraalka oo aad ku ridi karto boggaaga degitaanka laakiin waad ka qarin kartaa aragtida sidoo kale.
Waad ku mahadsan tahay qoraalka aad u xog badan. Su’aashayda kaliya ayaa noqon doonta, maxaa nuqul ka kooban oo fiidiyowga loogu soo celiyaa bogga soo degitaanka? Dadku horay ayey ugu arkeen YouTube-ka, maxaa diidaya inay yeeshaan waxyaabo kaladuwan oo laxiriira oo udhaxeeya ereyada muhiimka ah halkii? Tani miyeyna waxtar yeelanayn haddaanay intaas ka sii badanayn?
Su’aal weyn. Waxaa jira laba hab oo daawadayaal ah oo fiidiyowga ku socda - mid
waxaa loola jeedaa in laga yaabo in loo maro raadinta barnaamijka martigelinta fiidiyowga sida YouTube,
ama iyada oo loo marayo dadka tixraacaya fiidiyowga YouTube. Si kastaba ha noqotee, gelinta
fiidiyowga boggaaga ayaa wax ka beddeli doona boggaas mashiinnada raadinta oo soo bandhigi doona
baarka fiidiyowga ee ikhtiyaar ahaan loogu soo bandhigay natiijooyinka raadinta. Sida
si fiican, haddii aad leedahay shabakad wanaagsan oo bulsheed iyo PR - soo dhejinta fiidiyaha
waxyaabaha ku jira boggaaga degitaanka ayaa soo jiidan kara xitaa taraafiko badan. Ugu dambeyntii,
waxaa lagu muujiyey tijaabooyin badan oo fiidiyow ah oo ku yaal bogga degitaanka uu sameyn karo
Kordhi heerka sicirka Waan kugu raacsanahay hal ixtiraam -
hubi in fiidiyowga ku yaal boggaaga soo degaa uu la xiriiro nuxurka
halkaas. Taasi waa fiicnaan fiican!
Lugta Degmada Lugood
Waa inaan dhahaa maqaalkaaga kore waa midka ugufiican uguna xirfad fiirin badan ee aan maanta aqriyay waxyarna waan ka aqriyay You Tube hyperlinks. Isku xirnaanshaha u dhexeeya mashiinka raadinta fiidiyowga ee lambarka koowaad ah iyo milkiile milkiile cusub oo la dallacsiiyey ayaa aad u weyn oo dhif iyo naadir ah ayaa laga soo qaadaa "Websaydhada" kale ee SEO waxaanan u maleynayaa inay tani aad u khuseyso oo ay si wanaagsan oo macquul ah u tahay istiraatiijiyadayda suuqgeyntu. Mahadsanid.
Mar 28, 2012 at 4: 28 PM
Tani waxay ahayd biqil weyn.
Jun 10, 2012 at 7: 00 PM
Maqaal weyn oo loogu talagalay isku xirka youtube, tan ayaa loogu talagalay talooyinkaan seo
Nov 17, 2014 at 9: 32 AM
Talo xiiso leh iyo mahadsanid wadaagista. Iyadoo Google ay maamusho inta badan raadinta ka dhacda internetka, haysashada qaar ka mid ah waxyaabaha ku xiraya iyo iskuxirayaasheeda oo ah aalado kala duwan ayaa ah dariiq la hubo oo looga faa'iideysan karo maamule kasta ama blogger kasta. Iyo taraafikada tirada badan ee ay YouTube amar ku bixiso maalin kasta internetka, ma jirto meel ka wanaagsan oo looga faa'iideysto taraafikada.
Jan 12, 2015 saacadu markay ahayd 11:09 PM
Post weyn, jeclahay nuxurka. Waxaan isweydiinayay waxa mawduuca ah ee aad isticmaaleyso, jeclaada dhinaca dhinta ee dissapearing. Fadlan ii soo dir xiriiriyahaaga xiriiriyaha ah haddii aad mid heshay, wuxuu jeclaan lahaa inuu helo shaxanka iyo qalabka wax lagu dhejiyo
Jan 13, 2015 saacadu markay ahayd 3:38 PM
Waxaan isticmaaleynaa Superfly Responsive WordPress Menu Plugin laga heli karo Codecanyon. Mawduucu waa mawduuc asalkiisu aad u sarreeyo oo aan weli ka shaqeyneyno hagaajinta.
Jun 22, 2015 saacadu markay ahayd 5:43 AM
Nasiib darrose, waxaad u baahan tahay inaad heshid fiidiyow loo sameeyay si tan loo sameeyo taasoo ka qaalisan xayeysiinta oo keliya.
Jun 22, 2015 at 10: 45 PM
Fiidiyow ayaan si bilaash ah uga soo dejisan karaa iPhone-kayga! Maya?
Dukaanka E-Liquid UK
Jun 26, 2015 at 9: 50 PM
Weligaa maqal Fiverr?
Boostada weyn, habka, YouTube waa ilo cajiib ah oo loogu talagalay iskuxiraha iyo wacyigelinta.
29, 2015 at 5: 58 PM
Maqaal weyn! Xaqiiqdii waxaan u baahanahay inaan hubiyo.